Privacy Notice - Somali - Edurio
Sharaxaada Ilaalinta Xogta
Waxaan dooneynaa inaan waxbadan ka ogaano sida aan uga caawin karno iskuulkaaga iyo akadeemiyadaada Aasaasiga ah (AET) sidii loo horumarin lahaa kaqeybgalka waalidka, marka waqtigaaga iyo daacadnimadaada aad ayaa loo mahadcelinayaa!
Sahankan wuxuu ku weydiin doonaa su'aalo ku saabsan xiriirka ka dhexeeya xannaaneeyayaasha iyo dugsiga, kalsoonida istiraatiijiyadda dugsiga iyo dhinacyo kale. Sahanka waxaa sameeya AET waxaana maamula Edurio LTD (Edurio).
AET waxay ku shaqeysaa macluumaadkaaga shakhsiyadeed iyada oo ku saleysan daneyn sharci ah waana Maamulaha dhammaan macluumaadka shaqsiyadeed ee loo farsameeyo ujeedooyinka sahanka.
Ka baaraandegista xogtu waxay ka dhacdaa gudaha dhulka midowga yurub.
Noocyada macluumaadka shakhsiga ah ee la baaraandegayo
Ujeedooyinka laga leeyahay sahanka baaritaanka Edurio wuxuu socodsiin doonaa magaca iskuulka uu cunuggaagu dhigto, lambarka taleefankaaga, jinsiga cunuggaaga, in cunuggaagu haysto heerka lacagta ardayga, iyo darajada cunuggaaga uu dhigto iyo sidoo kale jawaabahaaga su'aalaha sahanka.
Dhammaan jawaabaha sahanka waa kuwo qarsoon oo laguma xiriirin doono shaqsi ahaantaada. AET waxay marin u heli doontaa oo keliya soo koobitaanka jawaabihii xog uruurinta oo qarsoon. Waxaad ka heli kartaa macluumaad dheeri ah oo ku saabsan jawaabta qaroodiga ah halkan.
Edurio wuxuu wali heli karaa jawaabahaaga shaqsiyeed ujeeddadiisu tahay hagaajinta wixii arrimo farsamo ee ka soo bixi kara inta lagu gudajiro baaritaanka. Xaaladda noocaas ah Edurio wuxuu hubin doonaa in macluumaadka lagu helo kaliya shaqaalaha Edurio idman oo keliya iyo ilaa inta lagama maarmaanka u ah xallinta arrinta.
Macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed waxaa farsameyn doona oo hayn doona Edurio keliya illaa inta ay lagama maarmaan u tahay ujeeddooyinka loogu talagalay, laakiin aan ka badnayn 12 bilood laga bilaabo maalinta sahanka la xiray.
Waxaad xaq u leedahay inaad codsato nuqul ka mid ah macluumaadkaaga, iyo sidoo kale inaad codsato in howsha xogtaada la joojiyo, la xaddido ama wax laga beddelo, iyo in xogtaada la tirtiro. Waxaad si dheeraad ah u adeegsan kartaa xuquuqdaada ku saabsan kaydinta xogta adigoo codsanaya in xogtaada loo gudbiyo maareeye kale.
Edurio uma wareejiso kumana iibiso xogtaada shaqsi, ama natiijooyinka falanqaynta iyo qiimeynta dhinacyada saddexaad. Ujeeddooyinka cilmi-baarista, tirakoobka iyo suuqgeynta iyo in la hagaajiyo Adeegyada Edurio, macluumaadkaaga waxaa loo isticmaali karaa qaab qarsoodi ah.
Waxaad xaq u leedahay inaad u xerayso cabasho sarkaalka kormeerka ilaalinta xogta ee ku saabsan howlaha habeynta macluumaadka ee kor lagu soo sheegay.
Haddii aad qabtid wax su'aalo ah ama walaacyo ah oo ku saabsan howlaha habraaca macluumaadka ee kor lagu sharaxay waxaad la xiriiri kartaa wakiillada soo socda ee AET iyo Edurio: